စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး | အမျိုးသားလွှတ်တော်
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မင်းတပ်ခရိုင်တွင် ကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ မှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနရုံးများ ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၌ ဓာတုဗေဒ စစ်ဆေးရေးဌာန၊ မျိုးရိုးဗီဇ (DNA)ဌာနခွဲကို ဖွင့်လှစ်၍ နိုင်ငံအနှံ့မှ မှုခင်းများအပေါ် DNA နမူနာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပါရဂူ၏ ထင်မြင်ချက်များအပေါ် တရားရုံးအသီးသီးမှ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်သေခံဥပဒေအရ လက်ခံကြားနာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(၁၇) ရက်မြောက်နေ့ မှတ်တမ်း (၉.၃.၂၀၁၇)
၁၇ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် (၉. ၃. ၂၀၁၇)
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့အနီးရှိ အဘော် လေယာဉ်ကွင်းအဟောင်း ဧရိယာတွင် ဓာတ်အားခွဲရုံ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရော်ဘာခြံရှင်များ အား လျော်ကြေးငွေ ကျပ် (၇၈၉)သိန်းကျော် ပေးချေခဲ့သော်လည်း မြေဧရိိယာသတ်မှတ်ချက် ပီပီပြင်ပြင် မရှိသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ လေလွင့်ပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သဖြင့် ၎င်းမြေနေရာကို ဧရိယာတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အဘော် လေယာဉ်ကွင်းဟောင်း ဧရိယာအား မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်စီမံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် မေးခွန်း
ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ အပေါက်ဝကျေးရွာအထိ ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အား လိုင်း သွယ်တန်းပြီး အပေါက်ဝကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ ဒိုမားကျေးရွာ၊ ထုံမံကျေးရွာ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကျေးရွာနှင့် ကွမ်ကဗွီးကျေးရွာများ မီးလင်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ မော်လမြိုင် – မုဒုံ – သံဖြူဇရပ် (၃၃)ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းမှတစ်ဆင့် (၃၃/၁၁)ကေဗွီ (3)MVA ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့မှ ရိခေါ်ဒါရ်မြို့သို့ မဟာဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ခြံစုရပ်ရှိ ပြည်သူများအတွက် လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့ မေးခွန်း
ချင်းပြည်နယ်ရှိ တီးတိန်မြို့နယ်နှင့် ထွန်းဇံမြို့နယ်တို့တွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း